नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार ! विवाहितहरुले अवश्य पढ्नुहोला ?? – ईमेची डटकम
नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार ! विवाहितहरुले अवश्य पढ्नुहोला ??
Posted byइमेची संवाददाता July 13, 2019 December 11, 2019 Leaveacomment on नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार ! विवाहितहरुले अवश्य पढ्नुहोला ??
तस्विरमा नेपाली मोडल मुना गौचन ।
काठमाण्डौँ । नारीले नै हो, घर-परिवारलाई सन्तुलित राख्ने । खुसी दिने । स्वस्थ्य बनाउने । सुख ल्याउने ।
Posted byइमेची संवाददाता July 13, 2019 December 11, 2019 Posted inजानकारी
सिमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएको बाँध फुटेर भारतकै गाउँ परे डुवानमा, नेपालतर्फको पानीको बहाव घट्दै